मुस्ताङका २ सय परिवारलाई २१ लाख बराबरको निःशुल्क कुखुरा वितरण ! – ebaglung.com
मुस्ताङका २ सय परिवारलाई २१ लाख बराबरको निःशुल्क कुखुरा वितरण !
२०७३ चैत्र २८, सोमबार ०६:१५	Top News, थप समाचार
केशव बि.क. मुस्ताङ २०७३ चैत २८ । जिल्ला पशुसेवा कार्यालय मुस्ताङले २०० परिवारलाई अण्डा दिन सक्ने ८ हप्ताका कुखुरा वितरण गरेको छ । जिल्लामा भएको अण्डा र कुखुराको मासुको मागलाई परिपूर्ति गर्न प्रति परिवार २०–२५ गोटाका दरले २१ लाख बराबरको निशुल्क कुखुरा वितरण गरेको वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत सुबल शाहले बताए ।
जिल्लालाई अण्डा र मासुमा आर्मनिर्भर बनाई जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउन सरकारी फार्म (पशु विकास फार्म पोखराबाट) बुटवलमा हुर्काइएका न्युह्याम्पसायर र अष्ट्रालोअर्क जातका कुखुरा गत चैत्र १८ गते थासाङ गाउँपालिकाका स्थानियलाई वितरण गरीएको हो ।
शाहका अनुसार प्रतिव्यक्ति ४५ अण्डा हुनुपर्नेमा मुस्ताङमा ३५ प्रतिशतले कमि छ । अण्डा र मासुका लागि बाहिरी जिल्लाको भरपर्नु पर्ने अवस्थामा कुखुरा वितरणबाट यसको परिपूर्ति र मुल्य वृद्धि कम गर्न टेवा पुग्ने बताईएको छ ।
जिल्ला पशुसेवा कार्यालयले अण्डा र मासु उत्पादनका लागि कुखुरा वितरण गरेकोमा स्थानिय हर्षित भएका छन् । जिल्लामा मासु र अण्डाको माग बढिरहेकाले कुखुरा पालन व्यवसायलाई व्यवस्थित ढंगले संचलान गरी यसको आपूर्तिमा सहयोग पु-याउने स्थानिय रीता पुनले बताइन् ।
कार्यालयले जिल्लामा कुखराको विकास र विस्तार गर्न खोरमा ६ हजार अनुदान दिएको र तालिम, औषधी, अचारी, भ्याक्सिन निशुल्क उपलब्ध गराउने जनाएको छ । आगामी वर्ष जिल्लामै चल्ला उत्पादन गरी वितरण गर्ने लक्ष्य रहेको वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत शाहले बताए । अण्डा मासुमा जिल्लालाई आत्मनिर्भर बनाउन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने कार्यालयले जनाएको छ ।
टेलिकम बागलुङका प्रमुखलाई मल्ममा स्वागत:4G सञ्चालन गर्ने योजना !